नेपालमा कति ठिक भए काेराेनाबाट ?
फरकधार / ८ जेठ, २०७७
टेकु अस्पतालमा उपचाररत ४ जना कोरोना मुक्त भएका छन् ।
टेकु अस्पतालमा उपचार गराईरहेका उनीहरुको पछिल्ला रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि डिस्चार्ज गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता विकास देवकोटाले बताए । उपचारमा आएको ९ औं दिनमा उनीहरुलाई डिस्चार्ज गरिएको हो। यो सँगै नेपालमा ४९ जना कोरोना मुक्त भएर घर फर्केका छन् ।
आज मात्र थप ९ जनामा कोरोना देखिएको छ। उनीहरु मध्ये १ जना रुपन्देही र ८ जना झापाका रहेका छन्। यो सँगै संक्रमितको संख्या ४५३ पुगेको छ भने ३ जनाको मृत्यु भएको छ । कोरोना संक्रमण ३८ जिल्लामा फैलिएको डा. देवकोटाले बताए ।
प्रकाशित मिति : जेठ ८, २०७७ बिहीबार १८:४५:२३,
नेपालमा सबैभन्दा पहिला बिजुली बलेको घर जुन अहिले छ अन्धकार !